Ogaden News Agency (ONA) – Jidka Trainka Cusub ee isku Xidhaya Addis Ababa Iyo Djibouti Saameyntiisu maxay ku tahay Qadiyada Ogaden
Jidka Trainka Cusub ee isku Xidhaya Addis Ababa Iyo Djibouti Saameyntiisu maxay ku tahay Qadiyada Ogaden
Posted by ONA Admin	/ June 23, 2015
Wadanka Djibouti iyo Gumeysiga Ethiopia ayaa sameystay jid cusub oo ah wadada Xadiidka Trainka ee isku xidha Djibouti iyo Addis Ababa, Waxaa horey uga sii jiray Dalka Djibouti iyo Dire Dawa wado xadiid oo labadaas isku xidha midkaas oo uu horey u dhisay Gumeysigii Cadaa ee Franchiga (France).
Wadadan Cusub ee Xadiidka ah ee isku xidhaysa labada dal waa mid casri ah oo halkii hada ka hor Addis Ababa Trainka kasoo baxa ee Dire Dawa Soo mara ee usii gudba Djibouti uu qaadan jiray laba maalmood iyo wax ka badan, Hada waxaa suurto gal ah innuu ku tago wax aan ka badneyn 10 Saacadood kaliya. Jidkan casriga ah ee loo dhisay labada dal waxaa lacagtiisa iyo farsamadiisaba lahaa Shirkado China ah oo dhimsmahan hirgaliyay.
Hadii hadaba aad maqashay China, waxaa niyadaada kusoo dhacaysa Shidaalka Ogadeniya. Waxaa lagawada warhaya shirkadaha Shidaalka Qoda ee raba inay soo saaraan Shidaalka Ogadeniya inay saldhig ka sameysteen Magaala Madaxda Djibouti. Waxaa sidoo kale xasuus mudan in horey loo dadajiyay dhismaha birtan xadiidka ah oo la filayo in socdaalka ugu horeeya ee la isticmaalo innuu noqdo bishan nagusoo fooda leh ee October 2015.
Gumeysiga Ethiopia, Taliska Ismaaciil cumer geele iyo Shirkadaha China waxay kala saxeexdeen qorshayaashan oo uu kamid yahay sidii Shidaalka Ogadeniya looga dhoofin lahaa Xeebta Djibouti. Djibouti oo aad u habeysay dakadaheeda isbadal wanaagsana ku sameysay ayaa soo jiidatay Taliska Ethiopia iyo shirkadaha shidaalka sidii loo meel marin lahaa dhoofinta shidaalka dhulka ogadeniya. Taliska Ethiopia oo aan laheyn Bad iyo dakado toona ayaa hada ka hor soo gatay Maraakiibta waaweyn ee casriga kuwaas oo uu ku xidhay Dakada Djibouti.
Qorshayaashan hadaba u qarsoon Ethiopia, Djibouti iyo Shirkadaha China ma yihiin mid hirgali kara, Shidaalka Ogadeniya ee lagu xisaabtamayo se malasoo bixin karaa? su’aashaas ayaysan wali jawaab loo helin. Waxaa la xasuuqay shacabkii dhulka Ogadneiya, waxaana la isku dayay in maskax ahaan, dhaqan ahaan, niyad ahaan iyo cudud ahaanba loo wiiqo shacabka Somaliyeed ee Ogaden. Waxaana la arkay in lagu guul dareystay oo taliska Woyanuhu xoog awoodi waayay innuu ku muquuniyo shacabka geesiga ah ee u taagan ilaalinta sharaftiisa, Diintiisa iyo dhulkiisa iyo Deegaankiisa intaba.
Taliska gumeysiga Ethiopia oo ah talis qowmiyad laga tiro badan yahay hoggaamiso ayaa rabta in kheyraadka Ogadeniya iyo kheyraadka dhulalka kale ee xooga ku maamushaanba jeebkooda ku shubtaan. Waxaana Aduunku aad ula yaabay in qorshayaasha Birta Xadiidka ah ee Djibouti iyo Ethiopia loo dhisayo uu kamid yahay Wado cusub oo loo dhisayo Djibouti iyo Maqale. Qorshahan oo ahaa mid qarsoon hadase soo shaac baxay waxaa Shirkadaha Chinuhu ay soo saareen Master Plankii Wadada Xadiidka ee isku xidhi doonta Makele iyo Djibouti. Shirkada Chinaha ee Qorshan wada waxaa lagu magacaaba Liu Xiaoyan.
Lasoco Siyaasad Xumada Gueysiga Ethiopia.